တွဲဖက်ပါမောက္ခ programmer Analyst (Specialist) - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » ဂျော့ဘ် » တွဲဖက်ပါမောက္ခ programmer Analyst (Specialist)
ယောဘသည်ဖွင့်ပွဲ: တွဲဖက်ပါမောက္ခ programmer Analyst (Specialist)
ရာထူး: တွဲဖက်ပါမောက္ခ programmer Analyst (Specialist)
ဒေတာထုတ်ယူခြင်း Manager ကို III ကို (DPM III ကို) ၏အထွေထွေကြီးကြပ်မှုအောက်, ကလေးသူငယ်လူမှုဖူလုံရေးဒစ်ဂျစ်တယ်န်ဆောင်မှုများ (CWDS) စီမံကိန်းကိုသည်တွဲဘက် Programmer Analyst, (ယား) လွတ်လပ်စွာစီမံကိန်းများအပေါ်ပရိုဂရမ်မာအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့၏ခေါင်းဆောင်အဖြစ် programming နဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအလုပ်နှင့်ပြုမူလုပ်ဆောင်ဘို့ ကလေးကသက်သာချောင်ချိရေးထောကျပံ့န်ဆောင်မှုများ၏ကျယ်ပြန့်နယ်ပယ်နဲ့ရှုပ်ထွေးသဘာဝတရား၏။
မှာသင့်ရဲ့ CalCareer အကောင့်မှတဆင့်အီလက်ထရောနစ် STD 678 လျှောက်လွှာနှင့်အခြားလိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများတင်ပြရန် ကျေးဇူးပြု. www.jobs.ca.gov။ သငျသညျအီလက်ထရောနစ်လျှောက်ထားရန်နိုင်ခြင်းမရှိသေးလျှင်တစ်ဦးကအခြားရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းလူ့အရင်းအမြစ်များကိုဆက်သွယ်ရန်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖော်ထုတ်ဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါသည်။
Completed applications များအပေါင်းတို့နှင့်တကွလိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်နိုင်ရန်အတွက်နောက်ဆုံးတင်ခဲ့သောနေ့စွဲတို့ကလက်ခံရရှိထားရပါမည်။
ဗိုလ်လုပွဲတင်ခဲ့သောနေ့စွဲ: 11 / 1 / 2017
အဘယ်သူသည် Apply နိုင်ပါစေ
တစ်ဦးသင်တန်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီတာဝန်ကျတဲ့အတှကျအရထိုက်ခွင့် reinstatement များအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီနှစ်ဦးနှစ်ဖက်လွှဲပြောင်းဘို့အရည်အချင်းပြည့်မီသည့်ခွဲခြား, လက်ရှိများမှာ SROA နှင့် / သို့မဟုတ်ပိုလျှံအရည်အချင်းပြည့်မီရှိသည်, သို့မဟုတ်စာရင်းအရည်အချင်းပြည့်မီတို (သို့မဟုတ်စာရင်းအရည်အချင်းပြည့်မီရယူ၏လုပ်ငန်းစဉ်၌ရှိကြ၏) အဘယ်သူသည်တစ်ဦးချင်းစီ။ SROA နှင့်ပိုလျှံကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေဟာသူတို့ရဲ့ applications များရန် "ပိုလျှံအက္ခရာများ" attach နိုငျသညျ။
complete application package (Applications ကိုနှင့်မဆိုသက်ဆိုင်သို့မဟုတ်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ) မှာသင့်ရဲ့ CalCareer အကောင့်မှတဆင့်အီလက်ထရောနစ်တင်သွင်းရမည်ဖြစ်သည် www.jobs.ca.gov.
မှာသင့်ရဲ့လျှောက်ထားအကောင့်မှတဆင့်အီလက်ထရောနစ်ပြည်နယ်အလုပ်အကိုင်လျှောက်လွှာ www.jobs.ca.gov။ အဆိုပါခွဲခြားရေး Specification အပေါ်ဖော်ပြထားသောအနည်းဆုံးအရည်အချင်းများနှင့်စပ်လျဉ်းအားလုံးအတွေ့အကြုံနှင့်ပညာရေးသင်အနေအထားများအတွက်အနည်းဆုံးအရည်အချင်းများဖြည့်ဆည်းပုံကိုသရုပ်ပြမှထည့်သွင်းရပါမည်။
တစ်ခုမှာစာမျက်နှာကိုဘယ်လိုသင့်ရဲ့ပညာရေးကိုဖြေရှင်းရင်း, သင်တန်းပေးခြင်း, အတွေ့အကြုံနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုတာဝန်ကြေညာချက်ထဲမှာစံတွေ့ဆုံရန်နှင့်ရပ်တည်ချက်ကိုအဘို့အသငျသညျအရည်အချင်းပြည့်မီ။ အဆိုပါ SOQ, အရှည် 12 အမှတ် font ကိုတဦးတည်း-စာမျက်နှာဖြစ်သင့်သည်။
ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း optional ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာပါဝင်သည်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်မလိုအပ်ပါ။
တစ်ဦးငှားရမ်းအင်တာဗျူးအဘို့စီစဉ်ထားလျှင်ငှားရမ်းအင်တာဗျူးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်နေရာထိုင်ခင်းလိုအပ်လျှောက်ထားလိုအပ်သောနေရာထိုင်ခင်းကိုတောင်းဆိုရမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါတောင်းဆိုချက်သည်အင်တာဗျူးအချိန်စာရင်းအဆက်အသွယ်၏ထိုအချိန်ကလုပ်ရပါမည်။ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်နေရာထိုင်ခင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်မေးခွန်းလွှာဒီအလုပ်ပို့စ်တွင်ဖော်ပြထားသော EEO အဆက်အသွယ်ညွှန်ကြားနိုင်ပါသည်။
အဆိုပါလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ကိုဆက်သွယ်ရန်ရာထူးသို့မဟုတ် application ကို process ကိုနှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်ရရှိနိုင်ပါသည်။
အင်တာဗျူးစီစဉ်ထားလျက်ရှိသည်အချိန်တွင်အင်တာဗျူး Scheduler မှအကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်နေရာထိုင်ခင်းအဘို့ကိုတိုက်ရိုက်တောင်းဆိုမှုများပါ။ သင့်အနေဖြင့်ဦးစီးဌာနရဲ့ EEO ရုံးမှဤအနေအထား (s) ကိုများအတွက်အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်နေရာထိုင်ခင်းသို့မဟုတ်တူညီသောအခွင့်အရေး Equal အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများနှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်အပိုဆောင်းမေးခွန်းများကိုညွှန်ကြားလိမ့်မည်။
ကယ်လီဖိုးနီးယား Relay Service: 1-800-735-2929 (TTY), 1-800-735-2922 (အသံ) TTY ဟာနားမကြားတစ်ဆက်သွယ်ရေးစက်ပစ္စည်းဖြစ်ပြီး, တစ်ခုသာ TTY စက်ပစ္စည်းတွေနဲ့တပ်ဆင်ထားတဲ့ဖုန်းတွေကနေလက်လှမ်းမှီဖြစ်ပါတယ်။
အကျိုးစီးပွား Code ကို၏ကယ်လီဖိုးနီးယားကျန်းမာရေးနှင့်လူ့န်ဆောင်မှုများအေဂျင်စီပဋိပက္ခအောက်မှာစီးပွားရေးအကျိုးစီးပွား (Form ကို 700) ၏ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် file ရန်လိုအပ်သကဲ့သို့ဤအနေအထားကို designated ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအနေအထားဟာရာတွင်ပါဝင်သည့်ချမှတ်ခြင်းများအတွက်တာဝန်ရှိဖြစ်ပါသည်, သို့မဟုတ်အလားအလာသူသို့မဟုတ်သူမ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာဘဏ္ဍာရေးအကျိုးစီးပွားအပေါ်တစ်ဦးပစ္စည်းအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါအစိုးရမဟုတ်သောဆုံးဖြတ်ချက်များ၏ချမှတ်ခြင်းကိုသြဇာလွှမ်းမိုးရန်သူသို့မဟုတ်သူမ၏အရာရှိတဦးကအနေအထားကိုသုံးနိုင်သည်။ အဆိုပါခန့်ထားခဲ့သောသူသို့မဟုတ်သူမ၏ချိန်းပြီးနောက် 700 ရက်အတွင်းတစ်ဦး Form ကို 30 ဖြည့်စွက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ အကျိုးစီးပွား Code ကိုလိုအပ်ချက်များ၏ပဋိပက္ခနှင့်အတူလိုက်နာရန်ပျက်ကွက်ခန့်အပ်ပယ်လိမ့်မည်။